Nhau - 3D simbi madziro hunyanzvi (2)
Metal Wall Chivezwa
Simbi Wall Wall Clock
3D simbi madziro hunyanzvi (2)
Brushed aluminium simbi yemadziro art iri kuramba ichiwedzera kufarirwa, uye vanhu vazhinji vanosarudza kukwidziridza dinning yavo, makamuri ekugara, nezvimwewo seti imwe yemafuta esimbi yekupenda.
Iwe haugone kana kufungidzira kuti mangani zvinhu zvinotonhorera zvinogona kugadzirwa nealuminium. Iyo inogona kuve diki yekushongedza kana hombe madziro hunyanzvi, iyo inofukidza iyo yakazara madziro. Zvakare, zvinhu zvealuminium zvishandiso zvepasirese zvekushongedza madziro sezvo zvichikodzera chero nzvimbo chero ipi zvayo pamwe nechero ruvara chirongwa Zvakanaka chaizvo kuva nezvimwe3D simbi madziro emhizhapamadziro ayo akagadzirwa kubva kune yakachena aluminium, nekuti inotaridzika kupenya uye kana yaitwa nemazvo. Chikamu cheunyanzvi pamadziro chinogona kuchinja zvachose mamiriro ekunze uye mamiriro ari mukamuri iwe yauri kuronga kuisa izvi pairi.
Mukupa kwedu, iwe unowana zvese zvaunoda, mhando dzakasiyana dze 3D simbiwallwall uye mapatani akati wandei, saka munhu wese anowana chimwe chinhu chinokwana iwe zvakanakisa.
Yese esimbi yedu yemadziro emhizha ari nyore kuisa uye akasimba kwazvo. Chinhu chakanakisa ndechekuti ivo vanokwana zvakakwana mukamuri chero yaunoda Ivo vanowedzera yakakodzera sitaira inoenderana neyako mamood kana neyakagadzirwa iwe yaunofarira. Kubva, zuva nezuva simbi yemadziro art iri kuramba ichiwedzera kufarirwa, usatambisa nguva, uye iva munzira yako kusarudza dzimwe kubva pawebhusaiti yedu.
Handsome imba Kushongedza ndiyo yekutanga nyanzvi inogadzira 3D simbi mafuta pendi muChina ine yakanakisa mhando nguva dzese.Waigona kungovimba nesu nekutenda edu akasarudzika uye ekugadzira pendi anogona kukuunzira iwe hukuru budiriro!